Intlawulo yekheshi eBangkok
Ukukhula kwethu kwe-hormone e-pharmacy e-Bangkok iyakwamukela intlawulo ngekheshi,
zifumaneka kuphela kwi-Thai Baht, iintlawulo zenziwa kwi-courier emva koko
ukuhlola nokuhlola umyalelo wakho.
Indlela yokuhlawula ukusuka kwamanye amadolophu kunye nemimandla eThailand?
Intlawulo kumakhasimende asePhuket, eChiang Mai okanye kwezinye iidolophu kunye
Imimandla yaseThailand yenziwe ngokuhlawulwa kwangaphambili.
Emva kokuba ubeke umyalelo kwiwebhusayithi yethu usebenzisa inqwelo yokuthenga
okanye nge-consultant inthanethi, siya kuthumela iinkcukacha ze-akhawunti yebhanki
kwi-imeyile yakho yokuhlawula.
- Igama lebhanki
- Inombolo ye-akhawunti
- Igama leKhampani
Emva kokuqinisekisa ukuhlawulwa kwiiyure ze-3-12 siya kuthumela impahla yakho
Funda kabanzi malunga nokuhanjiswa (ikhonkco)
Ndingayongeza njani imali kwi-akhawunti ye-HGH yekhemisi?
Ukuphakamisa i-akhawunti ngenkokhelo, kukho iindlela ze-2, makhe sithethe ngalowo nalowo.
I-1) I-Akhawunti iya phezulu ngeATM
I-2) Kwiziko ngalinye lezitolo okanye ivenkile enkulu yaseThai, unokufumana i-ATM
Umshini ukuphakamisa nokudlulisela imali kumnye ummkeli, oku kunokuba
kwenziwa ngokusebenzisa ikhadi okanye ngokusebenzisa oomatshini bemali owamkela imali
Ukwenza oku, khetha u-ATM
- Ukuthengwa kwemali
- Faka igama lebhanki
- Inombolo yeakhawunti yomxhasi
- Bese uhlawule ngemali okanye kwikhadi
- Emva kokuqinisekisa, qinisa igama negama lenkampani yommkeli
- Ukuqinisekiswa komyalelo
Emva kokugqiba intlawulo, nceda ugcine irisithi
Ukutshintshwa kwisebe lebhanki
Ukuba uhamba ngokwakho kwi-bhanki, yonke inkqubo iya
ungathathi ngaphezu kwemizuzu ye-15, bhala nje okanye uprintele iinkcukacha
ukuhlawula kwangaphambili, ukudlulisela idatha yokudlulisa ibhanki kwi-bhanki, i
Abasebenzi bebhanki banokukunceda ukuba udlulise ngoxolo kunye nezobukhulu.
Kubanikazi be-akhawunti yebhanki eThailand, inkqubo yokuhlawula injalo
kulula, iintlawulo zingenziwa ngokusebenzisa i-banking application okanye
ibhanki kwi-intanethi ngaphandle kokushiya ikhaya lakho.